Amalungelo awodwa omenzi we-Apple a Inkqubo yolawulo lwePod Home eneKhamera eDityanisiweyo | IPhone iindaba
Amalungelo awodwa omenzi we-Apple inkqubo yolawulo lweKhayaPod enekhamera edibeneyo
Ingelosi Gonzalez | | IPod Home, Izaziso
I-HomePod isithethi esikrelekrele esivela kwi-Big Apple eyabona ukukhanya kwemini ngoJuni 2017. Ngaphezu kweminyaka emithathu kamva, u-Apple wasazisa kumntakwabo omncinci: I-MiniPod Mini. Esi sithethi sinamandla sigcina zonke izibonelelo zePodPod yentsusa kunyawo oluncinci. Nangona kunjalo, Ukutsha kwinqanaba le-Hardware kufuneka liqhubele phambili ukuba iApple ifuna ukuqhubela phambili inkxaso yomsebenzisi kwimveliso enjalo. I-patent yamva nje ka-Apple ibonisa oko bakubizileyo 'Ulawulo ngokujonga', Inkqubo yolawulo edityaniswe yikhamera enokuthi ibandakanywe kwizizukulwana ezizayo zesithethi esi-smart sika-Apple.
Ukulawula i-HomePod ngamehlo akho kunokwenzeka ngokukhawuleza
Le patent ibhekisa kulawulo lwezixhobo zombane. Kweminye imizekelo, isixhobo se-elektroniki sisebenzisa ulwazi lokujonga ukwenza umncedisi wedijithali asebenze. […] Ulwazi lwe-elektroniki lusebenzisa amehlo ukujonga isixhobo esingaphandle esiza kusebenza kuso. […] Isixhobo se-elektroniki sinika umqondiso owahlula phakathi kwezithethi ezahlukeneyo.
Le yinkcazo esetyenziswe yiApple ukuyichaza ipatent entsha 'Ulawulo lwesixhobo usebenzisa ulwazi lokujonga ' eyabhaliswa ngo-Disemba 8 kwi-United States Patent nakwi-Ofisi yoRhwebo. Le patent intsha icacisa ukuba ingayintoni ikamva le-ApplePod yasekhaya. Umdibaniso we ikhamera kwisithethi esihlakaniphile ingavumela inkqubo yokusebenza ukuba ibandakanye izinto ezintsha eziphuculweyo ekuphathweni kwemveliso kunye neSiri.
Iimbono ezintathu ezicacileyo zokuba le teknoloji iza kubandakanya ntoni ziboniswa kuyo yonke inkcazo ebanzi yelungelo elilodwa lomenzi. Kwindawo yokuqala, iya kuvumela jonga ukuba ngubani othethayo kwaye uvumele ukufikelela kulwazi okanye hayi. Oko kukuthi, i-ID yobuso ifihliwe kwisithethi esikrelekrele esikunika ukufikelela kuyo okanye hayi. Okwesibini, kukuchongwa kweemveliso onokuthi unxibelelane nazo: ukufunyanwa okuzenzekelayo kweemveliso ezihambelana neKhayaKit, umzekelo, kusetyenziswa itekhnoloji yeARKit.
Kwaye okokugqibela, ukufunyanwa komntu othethayo xa kunokubakho abantu abaliqela kwaye izicelo zenziwe ngoluhlobo: 'Hei Siri khanyisa ukukhanya'. Kule meko, umsebenzisi uya kuba ekhomba okanye ejonge kwimveliso ekuza kudityaniswa kuyo kwinkqubo ngeKhayaKit. Kule meko, ukufunyanwa komsebenzisi, ukufunyanwa kwesibane, kunye nokwenza isenzo ekugqibeleni kuya kudityaniswa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Amalungelo awodwa omenzi we-Apple inkqubo yolawulo lweKhayaPod enekhamera edibeneyo
Iphulo lika-Facebook lokuCwangcisa iiNtengiso kuhlasela iApple "yokulwa ukungathathi cala"
Ikhamera ye-iPhone 12 Pro ngaphambi kweGalaxy S21